Tarihte Bugün : 8 Ekim 1938 Ankara-Sivas-Erzurum hattı | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[19 / 11 / 2019] တူရကီကုမ္ပဏီသည် Dubai Metro မျက်နှာကျက်ကိုပြုလုပ်သည်	971 အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု
[19 / 11 / 2019] Bursa ရှိဆရာများသို့အခမဲ့ကေဘယ်ကြိုးသတင်းများ!	16 Bursa
[19 / 11 / 2019] အဆိုပါ MU ရုရှားလမ်းကြောင်းဖုံးအုပ်တူရကီအတွက်ခါးပတ်လမ်း,?	06 တူရကီ
[19 / 11 / 2019] ဤတွင်အသစ်သော Metrobus ဖြစ်ပါတယ် .. ! Ekrem amomamoğluစမ်းသပ်ပြီး	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[19 / 11 / 2019] Sivas 2023 နှစ်ကအမြန်ရထားဖြင့်ရထားဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်သို့ Ankara ၌နှစ်	58 Sivas
[19 / 11 / 2019] Siemens ၏ပထမဦးဆုံးတဲ့အခါမှာတူရကီအတွက်ဖွစျသှားအဘယ်အရာ YHT သတ်မှတ်မည်ထုတ်လုပ်ရန်?	06 တူရကီ
[19 / 11 / 2019] BBB ရထားမောင်းနှင်မှုသည်ဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားလိမ့်မည်!	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[19 / 11 / 2019] အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ 2.5 ညမက်ထရိုသည်တစ်လတွင်ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[19 / 11 / 2019] မသန်စွမ်းသူများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်မှု	06 တူရကီ
[19 / 11 / 2019] မီးရထားလမ်းများ၊ လေဆိပ်များနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများပေါ်တွင်နှင်းတိုက်ကျရောက်ခြင်းကိုနောက်ဆက်တွဲလိုက်နာခြင်း	06 တူရကီ
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေသမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 8 1938 တူရကီ-Sivas-Erzurum လိုင်း
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş အထွေထွေ, တူရကီ, ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက် 0
အောက်တိုဘာလ 8 1892 Firecik နှင့် Komotini နှင့် m.r မထိုက်မတန်-Bauer သည်အထိပေးထားခဲ့တဲ့အစ္စတန်ဘူလ်ပြင်သစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်အတွက်လိုင်းဖြတ်ကူးဖို့ Salonika-Mitrovica လိုင်း Karasulu ဘူတာရုံအခွင့်ထူးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့က start ကနေဒရာမာ။ 1 အောက်တိုဘာလလိုင်းဧပြီလ 1893 1 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်စတင် xnumx't ။
အောက်တိုဘာလ 8 1908 အားလပ်ရက်-i ဘယ်မှာပါသို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာ (သပိတ်) ယာယီဥပဒေများအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 8 1938 တူရကီ-Sivas-Erzincan, Erzurum လိုင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။
Erzurum နှင့် Sivas 8 1945 အောက်တိုဘာလçarpıştı.xnumxကလူဦးသေဆုံးခဲ့သည်လေ့။
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 23 နိုဝင်ဘာ 1938 မီးရထားလမ်း…
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဒီဇင်ဘာလ61938 ဗဟိုဘူတာကျွန်းမှ ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ 24 1938 မီးရထား Kemah ရောက်ရှိ
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများသည် Adventure Park တွင်တွေ့ဆုံသည်
တူရကီကုမ္ပဏီသည် Dubai Metro မျက်နှာကျက်ကိုပြုလုပ်သည်
ဤတွင်အသစ်သော Metrobus ဖြစ်ပါတယ် .. ! Ekrem amomamoğluစမ်းသပ်ပြီး
Sivas 2023 နှစ်ကအမြန်ရထားဖြင့်ရထားဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်သို့ Ankara ၌နှစ်
အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ 2.5 ညမက်ထရိုသည်တစ်လတွင်ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်
ISAF 2020 သည်အံ့အားသင့်ဖွယ်တိုးတက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်သည်
မသန်စွမ်းသူများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်မှု
RayHaber 19.11.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ